Dagaal xalay ka dhacay Muqdisho – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADagaal xalay ka dhacay Muqdisho
November 2, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on Dagaal xalay ka dhacay Muqdisho
Warar dheerad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xalay ka ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo Al-Shabaab uu ku dhexmaray Degmada Hilwaa ee Gobalka Banaadir.
Dagaalka kadib ayaa waxaa la sheegay in ciidamo boolis ah oo gurmad ahaan u baxay qarax miino ay kula kacday goob u dhow saldhiga degmada Hilwaa sida ay dad Goobjoogayaal ah ay warqaat.com u sheegeen.
Inta la ogyahay Afar askari oo boolis ah ayaa ku dhintay tiro intaa ka badana waa ay ku dhawacmeen.
Ilo Wareedyo ayaa sheegay in khasaaro uu soo gaaray Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday.
Weli majiraan wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Degmada iyo Saraakiisha Booliska Soomaaliya, kaasi oo ku aadan in ay ka hadlaan dagaalkii iyo qaraxii xalay ka dhacay Degmada Hilwaa ee Gobalka Banaadir.
Nichalos Haysom oo war ka soo saaray doorashada Koofur Galbeed
705,313 total views, 2,530 views today
705,313 total views, 2,530 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
705,189 total views, 2,530 views today
705,189 total views, 2,530 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
705,219 total views, 2,530 views today
705,219 total views, 2,530 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
705,281 total views, 2,530 views today
705,281 total views, 2,530 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
705,335 total views, 2,530 views today
705,335 total views, 2,530 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]